Technology Archives - Page2of4- Shop
”Shop First Game မှာပါဝင်ပြီး ဆုတွေကိုရယူလိုက်ပါ”0387
ဖုန်းမှာ ဂိမ်းတွေကို Graphic ကောင်းကောင်းနဲ့ မထစ်ပဲဆော့နိုင်ဖို့ အဓိကလိုအပ်ချက်ကဘာတွေဖြစ်မလဲ?0732
”Netflix မှာ လူကြိုက်များနေတဲ့ နာမည်ရုပ်ရှင်တွေဟာ ဘာတွေဖြစ်မလဲ?”0232
The KaungHtet June 4, 2020 11:29 am June 4, 2020
Netflixမှာ ရုပ်ရှင်ကားပေါင်းများစွာရှိနေပြီး တစ်ခါတစ်ရံဘာရုပ်ရှင်ကြည့်ရမလဲဆိုတာရွေးရခက်နေတတ်ပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် Netflix လူကြည့်များတဲ့ ရုပ်ရှင်လေးတွေကို Review လုပ်ပေးထားပါတယ် Extraction ဒီကားလေးကတော့ သောရ် မင်းသားကြီး ခရစ် ဟမ်းဆွာ့ ပါဝင်ထားပြီး အနီးကပ် တိုက်ခိုက်ခန်းတွေ သေနတ်ပစ်ခန်းတွေ Combat …
”Spotify အကြောင်းသင်ဘယ်လောက်သိလဲဆိုတာဒီမေးခွန်းလေးတွေဖြေပြီးစမ်းသပ်ကြည့်ရအောင်”0548
The KaungHtet June 3, 2020 9:01 am June 5, 2020
”Google Gift Card တွေနဲ့ Apple Gift Card တွေအကြောင်းသိကောင်းစရာများ”0519
The KaungHtet June 1, 2020 11:33 am June 1, 2020
Google Gift Card နဲ့ Apple Gift Card တွေကို လူတော်တော်များများမှားတတ်ကြပါတယ်။ Google Gift Card တွေကတော့ Android အတွက် အသုံးပြုရတာဖြစ်ပြီး Apple Gift Card တွေကတော့ …
Blender တွေအကြောင်းသင်ဘယ်လောက်သိလဲဆိုတာ ဒီမေးခွန်းလေးတွေကို ဖြေပြီး စမ်းသပ်ကြည့်ရအောင်0232
📱ဖုန်းတစ်လုံးကို ရေရှည်ခံအောင် ဘယ်လိုသုံးရမလဲ?📱0930
❄Air con ကို မီတာခ အရမ်းမကုန်အောင်ဘယ်လိုအသုံးပြုကြမလဲ?❄04322
Aircon တွေအကြောင်းသင်ဘယ်လောက်သိလဲဆိုတာ ဒီမေးခွန်းလေးတွေဖြေပြီးစမ်းသပ်ကြည့်ရအောင်…01226
The KaungHtet May 14, 2020 9:55 am May 14, 2020
📷ကင်မရာတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သင်ဘယ်လောက်သိလဲဆိုတာဒီမေးခွန်းလေးတွေဖြေပြီး စမ်းသပ်ကြည့်ရအောင်…📷0315
အိမ်မှာသုံးဖို့ဖြစ်ဖြစ်၊ ရုံးမှာသုံးဖို့ဖြစ်ဖြစ် Printer လေးတစ်လုံးဝယ်ဖို့လိုအပ်နေပြီလား? 🤔 3085